38 O wee ruo n’ime oge a, mgbe Juda hapụrụ ụmụnne ya, na ọ mara ụlọikwuu ya n’ebe dị nso n’ụlọ otu nwoke, onye Adọlam,+ aha ya bụ Haịra. 2 N’ebe ahụ, Juda hụrụ nwa nwaanyị nke otu onye Kenan,+ aha nwoke ahụ bụ Shua. O wee lụrụ ya, ya na ya wee nwee mmekọahụ. 3 O wee tụrụ ime. E mesịa, ọ mụrụ nwa nwoke, o wee gụọ ya Ea.+ 4 Ọ tụụrụ ime ọzọ. Ka oge na-aga, ọ mụrụ nwa nwoke wee gụọ ya Onan. 5 N’oge ọzọkwa, ọ mụrụ nwa nwoke wee gụọ ya Shila. Ọ nọkwa n’Akzib mgbe nwaanyị ahụ mụrụ nwa ahụ.+ 6 Ka oge na-aga, Juda lụtaara Ea bụ́ ọkpara ya nwaanyị, aha ya bụ Tema.+ 7 Ma Ea, ọkpara Juda, bụ onye ọjọọ n’anya Jehova;+ ya mere, Jehova gburu ya.+ 8 N’ihi ya, Juda gwara Onan, sị: “Gị na nwunye nwanne gị nwee mmekọahụ, kuchiekwa ya ka ị mụtara nwanne gị nwoke nwa.”+ 9 Ma Onan maara na nwa ahụ agaghị abụ nke ya;+ o wee ruo na mgbe ya na nwunye nwanne ya nwere mmekọahụ, ọ nyụfusịrị ọbara ọcha ya n’ala ka o wee ghara ịmụtara nwanne ya nwa.+ 10 Ihe o mere jọrọ njọ n’anya Jehova;+ n’ihi ya, o gbukwara ya.+ 11 Juda wee gwa Tema nwunye nwa ya, sị: “Biri dị ka nwaanyị di ya nwụrụ n’ụlọ nna gị ruo mgbe Shila nwa m tolitere.”+ N’ihi na ọ gwara onwe ya, sị: “O nwekwara ike ịnwụ dị ka ụmụnne ya.”+ N’ihi ya, Tema gara biri n’ụlọ nna ya.+ 12 Ọtụtụ ụbọchị wee gabiga, ada Shua, bụ́ nwunye Juda,+ wee nwụọ; Juda wee ruoro ya uju.+ E mesịa, ya na Haịra enyi ya bụ́ onye Adọlam+ gbagooro Timna+ bụ́ ebe ndị na-akpachara ya ajị atụrụ nọ. 13 E wee kọọrọ Tema, sị: “Lee, nna di gị na-agbago Timna ịga kpachaa ajị atụrụ ya.”+ 14 O wee yipụ ákwà mkpe o yi wee chịrị ịchafụ fụchie onwe ya, o kpuchikwara onwe ya ákwà ma nọdụ ala n’ebe e si abanye Eneyim, nke dị n’ụzọ gara Timna. N’ihi na ọ hụrụ na Shila etolitewo ma a kpọrọbeghị ya kpọnye ya ka ọ bụrụ nwunye ya.+ 15 Mgbe Juda hụrụ ya, o chere ozugbo na ọ bụ nwaanyị akwụna,+ n’ihi na o kpuchiri ihu ya ekpuchi.+ 16 O wee gakwuru ya n’akụkụ ụzọ wee sị: “Biko, kwe ka mụ na gị nwee mmekọahụ.”+ N’ihi na ọ maghị na ọ bụ nwunye nwa ya.+ Otú ọ dị, ọ sịrị: “Gịnị ka ị ga-enye m ka mụ na gị nwee mmekọahụ?”+ 17 O wee sị: “Mụ onwe m ga-esi n’ìgwè anụ ụlọ m zitere gị nwa ewu.” Ma ọ sịrị: “Ị̀ ga-enye m ihe ibé ruo mgbe i zitere ya?”+ 18 O wee gaa n’ihu ịsị: “Olee ihe ibé m ga-enye gị?” o wee zaa, sị: “Mgbaaka i ji aka ihe akara+ na eriri gị na mkpara gị nke i ji.” O wee chịrị ha chịnye ya, ya na ya wee nwee mmekọahụ, o wee tụwa ya ime. 19 E mesịa, o biliri gaa fụpụ ịchafụ o ji fụchie onwe ya ma yiri ákwà mkpe ya.+ 20 Juda wee si n’aka enyi ya bụ́ onye Adọlam+ ziga nwa ewu ahụ ka o wee nata nwaanyị ahụ ihe ibé ahụ, ma ọ hụghị ya. 21 O wee jụwa ndị obodo nwaanyị ahụ, sị: “Olee akwụna ụlọ arụsị ahụ nke na-anọ n’Eneyim n’akụkụ ụzọ? Ma ha nọ na-asị: “Akwụna ụlọ arụsị+ anọtụbeghị n’ebe a.” 22 N’ikpeazụ, ọ laghachikwuuru Juda wee sị: “Ahụghị m ya, ndị obodo ahụ sịkwara, ‘Akwụna ụlọ arụsị anọtụbeghị n’ebe a.’” 23 Juda wee sị: “Ya werewe, ka nke a ghara iwetara anyị mkparị.+ Ma ọ́ dịghị ihe ọzọ, ezigawo m nwa ewu a, ma gị onwe gị ahụghị ya.” 24 Otú ọ dị, mgbe ihe dị ka ọnwa atọ gasịrị, a kọọrọ Juda, sị: “Tema nwunye nwa gị agbawo akwụna,+ lee, ọ tụrụwokwa ime+ site n’akwụna ọ gbara.” Juda wee sị: “Kpọpụtanụ ya ka a kpọọ ya ọkụ.”+ 25 Ka a na-akpọpụta ya, o zigaara nna di ya ozi, sị: “Ọ bụ nwoke nwe ihe ndị a tụwara m ime.”+ O kwukwara, sị: “Biko, leruo ha anya,+ mata onye nwe ihe ndị a, mgbaaka e ji aka ihe akara na eriri na mkpara a.”+ 26 Juda wee leruo ha anya wee sị:+ “Ọ bụ onye ezi omume karịa m,+ n’ihi na akpọrọghị m ya kpọnye Shila nwa m.”+ Ya na ya enweghịkwa mmekọahụ ọzọ mgbe nke ahụ gasịrị.+ 27 O wee ruo na mgbe ọ na-amụ nwa, lee, ọ bụ ejima nọ ya n’afọ. 28 O rukwara na mgbe ọ na-amụ nwa, otu n’ime ha sepụtara aka ya, nwaanyị na-aghọ́ nwa kere ya ibé ákwà na-acha uhie uhie n’aka ozugbo, sị: “Ọ bụ nke a bu ụzọ pụta.” 29 N’ikpeazụ, o ruru na ozugbo o seghachiri aka ya azụ, lee, nwanne ya pụtara, o wee tie mkpu, sị: “Gịnị ka ihe a i mere pụtara, na i tipuwo ahụ́ wee pụta?” N’ihi ya, a gụrụ ya Pirez.+ 30 E mesịa, nwanne ya, nke bu ibé ákwà ahụ na-acha uhie uhie n’aka, pụtara, e wee gụọ ya Zira.+